Mpanao Gazety Ao Myanmar Notànan’ny Miaramila, Ary Novonoina Avy Eo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2014 20:39 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , Français, Español, English
Mpikatroka antserasera maro no mampiasa ity sary ity ho toy ny sary famantarana ao amin'ny Facebook. Hoy ny vakin'ity soratra amin'ny teny Birmana ity “mihetsika ny rehetra mba hamoaka ny marina momba ilay mpanangom-baovao tsy miankina Ko Aung Kyaw Naing @ Ko Par Gyi”
Niteraka fahatezerana teo amin'ny olona marobe tao amin'ny firenena Aziatika Atsimo-atsinanana ny fahafatesana hafahafa nahazo an'i Ko Aung Kyaw Naing, mpaangom-baovao fantatra amin'ny anarana hoe Ko Par Gyi.
Nitantara momba ny fifandonana vao haingana teo amin'ny Tafika Myanmar sy ny mpitandro ny filaminanan'ny vondrona mpikomy vitsy an'isa Karen tao amin'ny Fanjakana Mon i Ko Par Gyi, mpiambina an'i Aung San Suu Kyi teo aloha raha nosamborina sy notànan'ny tafika Myanmar tamin'ny 30 septambra. Telo herinandro taty aoriana, nampandre ny Filankevitra Vonjimaika misahana ny Gazety ao Myanmar ny manamboninahitra miaramila fa namoy ny ainy tamin'ny 4 Oktobra ilay mpanangom-baovao tsy miankina nandritra ny fitànana azy, ary efa nalevina ny nofo mangatsiakany.
Nahatezitra ny maro ny fahafatesan'ilay mpanangom-baovao mbola teo am-pelatananan'ny miaramila ka niteraka famoriam-bahoaka nahitana olona maherin'ny 1000 tao afovoan-tanànan'i Yangon, renivohi-pirenena tamin'ny 26 Oktobra. Nanomboka teo dia niray hina mba hitaky ny hanaovana fanadihadiana ny nahafatesan'ilay mpanangom-baovao vaovao ireo olom-pirenena, mpikatroka sy vondrona firaisamonim-pirenena miisa 46. Araka ny filazan'ny Radio Free Asia, mpanao fihetsiketsehana teo amin'ny 20 teo no nosamborina ary voampanga amina andinin-dalàna tsy voafaritra ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana.
Nilaza ny tatitra ofisialin'ny miaramila fa voampanga ho niasa toy ny “‘mpiandraikitra serasera” ao amin'ny vondrona mpanohitra mitam-piadiana Karen (DKBA – Democratic Karen Benevolent Army) i Ko Par Gyi ary voatifitra izy raha saika haka basina mpiambina iray mba handositra ny fonja. Nilaza na ireo lehiben'ny Karen na ny fianakavian'i Ko Par Gyi fa tsy manana fifandraisana amin'ny vondrona velively izy.
Tsy mino ny filazan'ny miaramila i Than Dar, vadin'ilay mpanangom-baovao, sady mpikatroka manohana ny demaokrasia fa niezaka nandositra ny fonja ny vadiny. Miahiahy izy fa nampijaliana sy novonoina ny vadiny, ka nangataka fanadihadiana lalina mikasika ny nahafatesany izy, anisan'izany ny fandevenana azy sy ny fandidiampaty mba ahafantarana ny nahafaty azy.
Teo amin'ny fahefana nanomboka tamin'ny taona 1962 ny fitondrana miaramila ao Myanmar, na dia teo aza ireo fanovana demaokratika napetraka tao anatin'izay taona vitsivitsy izay. Misy ny governemanta sivily ankehitriny saingy mbola manohy mampiasa fahefana sy ambainday goavana ao amin'ny fanjakam-birao ny miaramila.
Mihevitra kosa i Min Ko Naing, avy ao amin'ny fikambanana 88 Generation Peace sy ny Open Society fa nomena fahefana be loatra ny miaramila kanefa tsy mba nangatahana ho tompon'andraikitra amin'izay nataony. Nandritra ny fanehoan-kevitra tamin'ny fihetsiketsehana no nitanisa ireo andinin-dalàna tao amin'ny lalàmpanorenana miaro ny tafika izy :
Hevero tsara izao; ny fisian'ny lalàna ao amin'ny lalàmpanorenana izay milaza fa izay rehetra avy ao amin'ny tafika – manomboka amin'ny zazavao ka hatramin'ny jeneraly – ka manao karazana heloka, dia tsy azon'ny fitsarana sivily tsaraina; midika izany fa manana tombontsoa be loatra izy ireo, ary fihoaram-pefy izany.
Ko Ko Gyi, mpikatroka politika avy ao amin'ity fikambanana ity ihany koa mihevitra fa tsy misy fanajana lalàna sy fiarovana ao amin'ny firenena. Hoy izy:
Jereo fotsiny ny fanambaran'ny Minisiteran'ny Fiarovana. Nosamborina tamin'ny 30 septambra izy ary namoy ny ainy ny 4 Oktobra; nanontany ny momba azy ny vadiny tamin'ny 19 Oktobra saingy tsy novalian'izy ireo izy fa namoaka fanambarana fotsiny izy ireo tamin'ny 24 Oktobra. Efa ho iray volana izany, maherin'ny 20 andro.Iza no tompon'andraikitra amin'izany?
Nay Myo Zin avy ao amin'ny Fikambanana Fampandrosoana Ara-tsosialy ao Myanmar kosa mihevitra fa ny fahavononan'ny miaramila hanonitra ny fianakavian'ilay mpanangom-baovao namoy ny ainy dia midika fa “tsy manan-danja noho ny bala ny olom-pirenena”.
Moethee Zun, mpikatroka politika sy mpanorina ny Antoko Demaokratika hoan'ny Fiarahamonina Vaovao, nilaza fa tsy tokony novonoin'ny miaramila izy na dia lazaina fa niezaka nandositra aza: :
Mibaribary fa tsy mba nanana basy i Ko Par Gyi. Olo-marina sy tompon'andraikitra izy. Na dia nanana basy aza izy, tsy tokony nataon'izy ireo (miaramila) an'izany [notifirina].
Mihevitra ihany koa ilay bilaogera Zay Nyein fa tsy azo atokisana ny fiampangana nolazain'ny tafika:
Tsy olona matahotra fonja i Ko Par Gyi. Efa gadra politika ihany koa ny vadiny. Fantany tsara fa tsy maintsy havotsotra ihany izy rehefa any am-ponja. Amin'izao vanim-potoanan'ny demaokrasia izao, fantany fa misy ny olona manohana azy raha sendra alefa any am-ponja izy. Tsy zava-baovao aminy ny momba ny famonjana. Noho izany, tsy mampino tanteraka raha niezaka naka basy izy mba handositra ny fonja.
Moe Thway avy amin'ny Generation Wave, iray amin'ireo mpikarakara ny fihetsiketsehana, kosa nandrisika ny vahoaka mba hanohana ireo mpanangom-baovao.
Nandritra ny fotoana tsy nananantsika ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, ireo mpikatroka politika no mpanangom-baovao. Na dia ny vadin'i Ko Par Gyi koa aza efa nomelohina higadra mandra-pahafatiny noho ny lahatsoratra politika nosoratany. Raha tsy nanao sorona ny ainy izy ireo, tsy mba nahafantatra ny marina isika. Koa amin'izany, mba tsy hanasokajiana azy ireo ho mpanangom-baovao tsotra na mpikatroka politika, tokony hiaro ireo izay miezaka mampita ny marina amintsika ny olona.
Mampiseho indray ity vono olona farany ity fa ilaina maika ny fiarovana ireo mpisehatra amin'ny fampahalalaham-baovao ao amin'ny firenena. Na dia efa nofoanana aza ny filankevitra mpanao sivana, tsiaro ratsin'ny fanohizana ny famerena ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny demaokrasia ao Myanmar ny fahafatesan'i Ko Par Gyi.